Akagadzira Grating Panel
Fenzi & Stanchion
Umbwa muna 1992, kufukidza imwe nzvimbo 25000 mativi metres uye workshop nharaunda 18000 mativi metres, Rine nyore motokari uye mukuru nzvimbo pamwe yemaminitsi 30 nemotokari kuna Ningbo Lishe International Airport chete uye 25 yemaminitsi nemotokari chete Ningbo Port --- akakurumbira dzakawanda gungwa chengarava pamwe zvakanakira asiri silting, kwakadzika-mvura uye ice-isina gore rose.
NJMM ane mazhinji equipments, dzakazara Michina uyewo mupfumi gadzira zvakanaka uye noruzivo muchisviniro-welded simbi nesefa nharaunda pamusoro makore 10. NJMM pakati vagadziri tiite vashoma vane rose kugadzirwa muitiro kubereka pakapuranga kuti kwakakurudzira simbi nesefa.
The kufambira kukura sayenzi yemazuva uye ano, pamusika nokuti zvinhu uye mabasa vava kuramba zvichiwedzera, kuti nechokwadi unhu pre-sale basa, kambani ine zvakaoma kusarudzwa kwacho itsva vaiendeswa vashandi, uye inopa siyana kudzidziswa basa uye mikana yokudzidza kunze uye michina vashandi. Company kuti "basa uye inobudirira, mutengi pakutanga" basa ndehwokuti kupa zano nyanzvi uye hwokugadzira kutsigira vatengi.
Quality ndiye upenyu, pfungwa uhwu ndiwo mweya noupenyu. Naizvozvo, kambani yave kuvandudzwa chigadzirwa quality, uye simbisai zvizere unhu muchiso ruzivo pakutanga. Company ine nyanzvi unhu yokuedzwa maturusi uye kuedza vashandi, chinangwa kuti pave unhu uye chiwedzere makwikwi akaitwa.